Global Voices teny Malagasy » Hazakazaka mampitamberina ny tsiaro sosialista: Nalaza haingana dia haingana an-dahatsary ireo fiara Yogoslavy fahita mahazatra · Global Voices teny Malagasy » Print
Voadika ny 13 Jona 2019 6:23 GMT 1	 · Mpanoratra Filip Stojanovski Nandika Andriamifidisoa Zo
Sokajy: Eoropa Afovoany & Atsinanana, Alemaina, Bosnia Herzegovina, Italia, Kosovo, Kroasia, Makedonia, Montenegro, Polonina, Serbia, Slovenia, Hevitra, Mediam-bahoaka, Tantara, Teknolojia, Vaovao Tsara
Sarin'ny fiara hita ao amin'ny lahatsary hita ao amin'ny Wikipedia: Zastava 101 , Renault 4 , Volkswagen Beetle , Yugo 55 , Zastava 750 , ary Polski Fiat 126 
Nihanaka haingana dia haingana tao amin'ny faritra Balkans ny lahatsary iray avy any Slovenia fifanalana hazakazaka eo amin'ny fiara nanana ny lazany tao amin'ity firenena nandrafitra an'i Yogoslavia fahiny ity. Na ny tanora na ny lazondazony dia samy liana tamin'ity lahatsary ahitana ireo maodelim-piara nanana ny lazany nandritra ny taompolo 1970s sy 1980s mifaninana hahazo ny fiamboniana faratampony ity, ka mampanembona ireo niaina izany fotoana izany, ary manome aingam-panahy ireo taranaka vaovao mpiondana fiara vita Yogoslavy.
Novokarin'ny tranonkala mpiondana fiara Atmosferci, asongadin'ny lahatsary fohy “Fahano! – Hazakazaky ny fiaran'ny fahatanorantsika” (Na juriš! – Dirka z avtomobili naše mladosti ) ny hazakazaky ny fiara enina mitsitsy izay saimbôlin'ny saranga antonony nandritra ny vanim-potoana volamenan'ny sosialisma yogoslavy. Herinandro monja taorian'ny nivoahan'ny lahatsary tao amin'ny YouTube dia efa nihoatra ny 400.000 ny nijery azy.
Ilay malaky sy ilay vinitra, endrika Yogoslavy
Ireo fiara enina hita ao amin'ny lahatsarin'ny Atmosferci sy ny fomba namariparitan'ireo mpampiatrano azy ireo.
Zastava 101 , 1972: “Tahaka ilay iray nomen'i Tito  ho fanomezana ho an'i Breznev “
Renault 4 TL,  1977: Antsoina hoe (4L) “Ilay efatra” amin'ny fiteny isankarazany, izay natambatambatra araka ny lisansa frantsay tao Novo Mesto, Slovenia ho an'ny tsena Yogoslavy;
Volkswagen Beetle , 1973: Vita tany Alemaina Andrefana izay”nobaikon'i Hitler hamboarina tamin'ny voalohany, saingy ny mampihomehy aminy dia izao tontolo izao tsy anavahana no nitia azy, angamba noho izy narafitr'ilay kalaza Ferdinand Porche”
Yugo 55 , 1983: Angamba tsy marina kosa ny filazan'i Atmosferci fa hevitra notakarina avy amin'ny kolontsaim-bahoaka amerikana tavaratra ary “iray amin'ny fiara ratsy voatra indrindra hatramin'izay” ny Yugo.
Zastava 750,  1976: Nahazo anaram-bositra hoe “Fičo” amin'ny fiteny Slovenina; kely saingy mahavariana fa malalaka ary mitovy hatrany ny hafanana ao anatiny na inona na inona toetrandro ary azo itarihana.
Fiat 126 BSI poloney , 1987: nanana ny lazany ara-kolontsaina tany Eoropa tsy tandrefana, nahazo anarambositra hoe “akanjovy kely” amin'ny fiteny Serba/Kroaty ary Makedoniana, fa “parasy kely” amin'ny fiteny Slovenina.
Na dia manana ny endrika fiaram-pianakaviana mahazatra aza, Hita ao amin'ny lanonam-pihazakazahana  — fanatanjahatena hita ao amin'ny filma yogoslavy tsy lefy laza “Sokajy kilasim-pirenena hatramin'ny 785 ccm ” (1979) — avokoa ny endrika nasiam-panovana amin'ireo fiara rehetra ireo.
Ny lohatenin'ny lahatsarin'ny Atmosferci (“Na juriš!”) no hiakan'ady  fanaon'ny partisans Yogoslavy. Ampahatsiahivin'izany ny rehareham-pitiavan-tanindrazana nifototra tamin'ny tolona antifasista natao nandritra ny ady lehibe faharoa sy ny taorian'ny adim-pahaleovantenan'i Yogoslavia manoloana ireo vondron'ny ady mangatsiaka.
Ao amin'ny lahatsary, mifaninana hazakazaka ireo telo mpampiatrano sy ireo solveniana telo kalaza raha misy ny fizaràna fanamarihana tahaka ny hoe “efa nanamory ny iray amin'ireny ny dadako.” Miteny sloveniana ny lahatsary fa ahitana dikantsoratra Kroaty. Na izany aza dia efa mahazava ny tenany ny ampahany maro amin'ilay lahatsary ary hita amin'ny endrika lahatsoratra eo amin'ny efijery ny vokatry ny hazakazaka.
Yugo: sariohatry ny fiadanana sosialista sy ny firindrana talohan'ny ady
Tanelanelan'ny taona 1986 ka hatramin'ny taona 1992, nanondrana fiara Yugos mihoatra ny 140.000 nankany Etazonia i Yogoslavia. Mifanaraka amin'ny fomba fijery ao amin'ny firenena hoe ratsy voatra ny fiara, dia sarimihetsika Hollywood maro no manasongadina Yugo ao anaty fiantraika loza mampihomehy mandritra ny fifanenjeham-piara. Bruce Willis sy Samuel L. Jackson izao ohatra manolo azy amin'ny alalan'ny fijapiana Mercedes iray ao amin'ny sehatra  iray avy amin'ny filma iray mamitaintaina nivoaka tamin'ny taona 1995 tao amin'ny “Die Hard with a Vengeance .”
Fa mitondra fanembonana maro kosa ireo fiara ireo ho an'ireo Yogoslavy maro taloha Generation X  izay efa nisitraka izany fiainana talohan'ny fivakivakisan'ny federasiona izany.
Tarika rock Bosniaka Zabranjeno Pušenje  efa nanokana ny iray amin'ny hirany taorian'ny ady ho an'ny Yugo 45 . Lazain'ny tononkira (indreto izy ireo  amin'ny fiteny bosniaka sy anglisy) ny tantaran'ny fiezahan'ny fianakaviana iray hividy ilay fiara. Raha lazaina amin'ny fomba fijerin'ny faralahy, voalaza ao fa kely ny zanany amin'ny findramam-bola nabdritra ny sosialisma.
Manaraka akaiky ilay fitantarana ara-panoharana ilay lahatsary mampihomehy mampalahelo: taloha nampiasa ny maodely Yugo 45 hiasana andavanandro na hialàna voly ny manodidina marofoko; ary tapitra izany rehetra izany tamin'ny fanadiovana ara-poko  tamin'ny ady bosniaka. Ny tena tanjona farany ampiasana ny fiara dia ny mba ahafahan'ny fianakaviana mandositra ny tanindrazany, mitondra “harona nylon roa” ahitana ny fananana, ary manori-ponenana indray any amin'ny tanàna hafa ho mpialokaloka.
URL to article: https://mg.globalvoices.org/2019/06/13/140280/
 Sokajy kilasim-pirenena hatramin'ny 785 ccm: https://www.imdb.com/title/tt0079606/
 indreto izy ireo: https://lyricstranslate.com/en/jugo-45-yugo-45.html
 fanadiovana ara-poko: https://en.wikipedia.org/wiki/Ethnic_cleansing